UNWTO: Tourism’s leading role in creating more and better jobs | Travel Associations News
Ikhaya » Iindaba zeMibutho yoKhenketho » I-UNWTO: Indima ephambili yezokhenketho ekudaleni imisebenzi emininzi nangcono
I-UNWTO: Indima ephambili yezokhenketho ekudaleni imisebenzi emininzi nangcono
Intswela-ngqesho kwihlabathi liphela iphezulu ngaphezulu kwe-190 yezigidi kwi-2018, ngokwe-International Labour Organisation (ILO). Eli zinga lothusayo lifuna ukuba onke amacandelo ezoqoqosho adlale indima yawo ekudaleni imisebenzi, ngokubonelela ngemisebenzi ezinzileyo. Ngelixa icandelo lezokhenketho kungoku nje livelisa iipesenti ezili-10 zemisebenzi yehlabathi, amandla alo - ukuba afakwe kakuhle, angangumthombo ophambili wengqesho kunye noshishino. Oku kubonisa isihloko esibalulekileyo sengxoxo, ekubeni ibiyi-ajenda kwintlanganiso yesi-8 yaBaphathiswa bezoKhenketho kuqoqosho lwe-G20 kunye noMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) eBuenos Aires, eArgentina.
Kukhululo lwe-UNWTO, uMphathiswa wezoKhenketho e-Argentina u-Gustavo Santos ucatshulwe esithi, "Kufuneka siphakamise indima ukhenketho ekubumbeni ikamva lehlabathi lethu njengecandelo eliza kudala imisebenzi emininzi kule minyaka ilishumi izayo".
Ngokwenza oku, kufuneka kubekho indlela emanyanisiweyo yekamva lomsebenzi kwezokhenketho, kubandakanya ukuphuculwa nokuphunyezwa kwemigaqo-nkqubo emitsha ngoorhulumente abohlukeneyo kunye nabachaphazelekayo. Oku kubandakanya ukwamkela izinto ezintsha kunye netekhnoloji, ukulungelelanisa iinguqulelo zedijithali eziphambili, kunye nokukhuthaza uphuhliso lwezakhono kunye nemfundo ukudala imisebenzi emitsha efanelekileyo.
Ngokuhambelana noku, uNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili wacela iinkokheli zokhenketho ukuba "zamkele inguquko kwezobuchwephesha kwaye zisebenzise amandla azo okudala imisebenzi engakumbi kunye necandelo lethu, ukwenza ukhenketho lube yintsika yokwenyani yeenjongo ze-G20 zokukhula okubandakanyayo nokuzinzileyo. ”.
Nangona kunjalo, imiceli mngeni emikhulu iqhubeka nokuthintela uphuhliso lwezokhenketho njengeyona nto iphambili ekudaleni imisebenzi engakumbi nengcono. Ukuvela kweemarike ezintsha, ukutshintsha indlela yokuphila, ukwanda kokhuphiswano, utshintsho kubuchwepheshe, ukukhula kwezobuchwephesha, ukunyuka kokuhamba, iipateni zebango kunye nokuziphatha kokuhamba, kunye noxinzelelo lokuhambisa amava okhenketho akumgangatho ophezulu kubakhenkethi yenye yemingeni echazwe kumgaqo-nkqubo we-G20 . Ngokuqaphelekayo, ukungangqinelani phakathi kwamabanga emfundo kunye nenyani yempangelo sisithintelo esikhulu esingenakudlalwa ekufezekiseni amandla apheleleyo okhenketho njengomqeshi.
“Njengomntu ochaphazelekayo kwezokhenketho, sikholelwa ekubeni ukubaluleka kwemisebenzi nokwamkelwa kwenkcubeko kwindawo yokusebenza kubaluleke kakhulu. Ukongeza, sihlala sibonelela ngoqeqesho olunzulu kubasebenzi bethu kunye namaqabane ukuphucula ukukhula kwezakhono, utshilo uCyrus Onyiego, Jumia Travel Kenya Country Manager.
Amanyathelo ngamaninzi ke ngoko acetywayo ngaBaphathiswa bezoKhenketho kuqoqosho lwe-G20, ngenjongo yokuguqula le mingeni ibe luncedo kukhuphiswano:
Imigaqo-nkqubo ekhuthazayo ekhuthaza ingqesho epheleleyo nenemveliso kwaye iququzelele inkqubela phambili kwezokhenketho kwaye ikhuthaze ukudalwa kwemisebenzi efanelekileyo, amashishini azinzileyo, kunye noshishino, phakathi kwabasetyhini nolutsha;
-Ukuseka iinkqubo-sikhokelo ezifanelekileyo zokukhuthaza ukuvela kwezinto ezintsha, ukurhweba kunye nokudibanisa indalo kunye neenkqubo zokudibanisa ukuqala, iinkampani eziphambili, abatyali mali kunye noorhulumente kwicandelo lokhenketho lwexabiso;
-Ukudala iindlela zokusebenzisana phakathi kwamaziko emfundo kuwo onke amanqanaba, icandelo labucala, oorhulumente, kunye namaqabane etekhnoloji yokujonga kwakhona iinkqubo zemfundo kunye nemigaqo-nkqubo yophuhliso lwezakhono
Ukuthathela ingqalelo ukubaluleka kwee-SME kumacandelo okhenketho, elifa lemveli, kunye nenkcubeko ngenxa yegalelo lawo ekudalweni kwemisebenzi nakwindima yabo ekugcineni nasekunyuseni izibonelelo zenkcubeko;
Ukukhuthaza ukusetyenziswa kwetekhnoloji yedijithali ukuququzelela uhambo kunye nokubandakanya abathathi-nxaxheba kwezobuchwephesha kwimigaqo-nkqubo yesizwe yokhenketho
Ezokhenketho ziludidi lwesithathu ngobukhulu kumazwe angaphandle, emva kweekhemikhali kunye nezibaso. Ngo-2016, iirisithi zokhenketho lwamazwe aphesheya kunye nezothutho lwabakhweli zabalelwa kwi-30% yeenkonzo zehlabathi ezithunyelwa ngaphandle (i-1,442 yezigidigidi zeedola) kunye ne-7% yokuthumela ngaphandle kweempahla kunye neenkonzo. Kuqoqosho lwe-G20, ukhenketho lwamazwe aphesheya lwenze phantse i-1,060 yezigidigidi zeedola, ezimele i-6.3% yazo zonke izinto ezithunyelwa ngaphandle ze-G20; ngokwe-UNWTO.
Ingxelo ka-2017 yokubuka iindwendwe yiJumia Travel ibonisa ukuba eKenya, igalelo lecandelo kwingqesho limi kwi-9.3% ngo-2015. Oku kulindeleke ukuba kunyuke nge-2.9% ngonyaka ngo-2026, igalelo lilonke kwi-9.5% yengqesho iyonke.